Muxuu Farmaajo uga duwanaa musharaxiinta la tartamay ? - iftineducation.com
Muxuu Farmaajo uga duwanaa musharaxiinta la tartamay ?
iftineducation.com – Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay u soo noqday Ra’iisalwasaare ayaa ku guulaystay xalay madaxtinimada dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha xilku ka dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo aad looga codad badnaa ayaa ka tanaasulay inuu wareegga saddexaad la tartamo.
Xasan Shiikh oo khudbad u jeediyay xildhibaanada ayaa ku baaqay in la lala shaqeeyo madaxwaynaha cusub.
Madaxweyne Farmaajo ayaa isla goobtaasi lagu dhaariyay, isagoo Khudbad uu u jeediyay xildhibaanada ugu mahadceliyay Xasan Sheekh Maxamuud sida wanaagsan ee uu xilka u wareejiyay, waxaa kale oo uu ammaanay Shiikh Shariif.
Soomaali fara badan ayaa ku farxay oo u damaashaaday madaxweyne Farmaajo, meelaha looga damaashaaday waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho, gobolada dalka qaarkood, Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Haddaba, Farmaajo ayaa shan qodob kaga duwanaa musharaxiinta la tartamay kuwaasoo malaha ka qeyb qaatay guusha uu ka gaaray tartanka doorashada, waxaana shantaas qodob ay kala yihiin:-
1-Ku xirnaan la’aanta dowlado shisheeye.
Qaar ka mid ah musharaxiinta ugu waaweyn ee ka qeyb galay tartanka doorashada ayaa waxaa lagu xamanayey iney gadaal ka riixayeen dowlado shisheeye, balse Farmaajo kama mid aheyn siyaasiyiinta la hadal hayey iney dowlado kale ay taageero ka helayaan.
2-isagoo aan taageero ka helin madaxda maamul goboleedyada dalka.
Musharaxiinta ugu waaweyn qaarkood sida Cumar C/rashiid, iyo Xasan Shiikh meelaha taageerada ugu badan ay ka filayeen waxaa ka mid ah madaxda maamulka goboleedyada qaarkood oo ay madax ka ahaayeen rag iyaga taageera sida madaxda maamulada Puntland, Galmudug iyo Hirshabelle, hase ahaate Farmaajo ma jirin hal maamul goboleed oo ka taageerayey ololihiisa doorashada.
Maxamed C/llaahi Farmaajo waxaa uu ka mid ahaa dhalinyarada ka dhex muuqatay Musharaxiinta ugu cadcad ee u soo baxay wareega labaad ee doorashada, waxaana jiray guux isbedel doon ah oo ku jiray dhalinyarada cusub ee ku soo biiray baarlamanka taasoo horseeday inuu helo codad badan oo u furay wadada guusha.
Inkastoo doorashadan ay aheyd mid baarlamaani ah oo aysan shacabku door ku laheyn haddana xildhibaanada Baarlamanka waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ku xusheen farmaajo waxaa ka mid ah taageerada uu shacabka ka heystay oo dad badan ay ka dheregsan yihiin, iyagoo doonayey iney iska meyraan xanta bulshada ugu jirtay ee sheegeysay iney yihiin laaluush qaatayaal aan dan ka laheyn maslaxada ummadooda.
5-Maamulka wanaaga iyo kasbashada quluubta dadka.
Madaxweyne Farmaajo waxaa uu shan sano ka hor ra’isul wasaare ka soo noqday dowladii KMG aheyd ee uu hogaaminayey Shariif Shiikh Axmed, isagoo xilka hayey lix bilood oo kaliya, waxaana mudadaas kooban ee uu xilka hayey uu si fiican tashiilay dakhligii koobnaa ee dowlada soo galay, wuxuuna si hufan wax badan uga qabtay mushahar la’aan iyo daryeel xumadii heysatay shaqaalaha dowlada iyo ciidamada XDS oo dagaal adag kula jiray Al-shabaab oo xiligaas gacanta ku hayey kala bar caasimada, taasina waxay keentay inuu soo jiito quluuubta shacabka.